Manao Volavolan-dalàna Vaovao Amin’ny Fandrahonana Atao Amin’ny Alàlan’ny Aterineto i Indonezia, Fa Milaza Kosa Ireo Mpikatroka Fa Izy Ireo No Kendrena Amin’izany · Global Voices teny Malagasy
Manao Volavolan-dalàna Vaovao Amin'ny Fandrahonana Atao Amin'ny Alàlan'ny Aterineto i Indonezia, Fa Milaza Kosa Ireo Mpikatroka Fa Izy Ireo No Kendrena Amin'izany
Voadika ny 10 Oktobra 2016 2:23 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, عربي, Español, English
Mpianatra ao amin'ny sekoly iray any Yogyakarta, Indonezia. Sary avy tamin'ny Intel Free Press tao amin'ny Flickr. (CC BY 2.0)
Natao hiaro ireo ankizy ilay fanovàna natolotra amin'ny Lalànan'ny Loharanom-baovao Elektronika sy Fampitam-baovaon'i Indonezia (ITE), tamin'ny famadihana ho heloka bevava ny “fandrahonana atao amin'ny alàlan'ny Aterineto”, fa ireo mpikatroka mafana fo sasany sy ireo mpiaro ny fahalalahana miteny kosa nampitandrina hoe mety ho afaka ampiasaina hanemporana ireo mpanohitra ara-drariny ihany koa ilay lalàna vaovao.
Hatramin'ny nampiharana io ny taona 2008, nampiasa ny Lalànan'ny ITE ny governemanta mba hanenjehana sy hisamborana ireo mpikatroka mafana fo, amin'ny fiampangàna ireo mpitsikera ny fanjakana ho nanao fanalàm-baràka. Ny taona 2015, nandrakitra karazana tranganà fanalàm-baràka amin'ny Aterineto 11 isa nanenjehana ireo mpikatroka mafana fo, ny sampana Indonezianan'ny Tambajotran'ny Fahalalahana Miteny any Azia Atsimo Atsinanana (SafeNet).
Hatreto, nampiasaina nhanenjehana olona am-polony mampiasa Facebook, Twitter, ary ireo tolotra amin'ny finday toy ny WhatsApp sy Blackberry Messenger, ilay Lalànan'ny Aterineto—indrindra ny Andalany Faha-27, Andiany Faha-3.
Nanamarina ireo sasany amin'ireo fitoriana fanalàm-baràka notaterina tany amn'ny polisy ny SafeNet, ary nahita fa tsy tena meloka taminà fanalàm-baràka na fitenenan-dratsy ny finoana ny ankamaroan'ireo nampangaina:
Nohamarininay ireo tranga ireo ary hitanay fa tsy tafiditra tamin'inon'inona izay mety holazaina fa manàla baràka na maniratsira izy ireo. Ny tena marina, nosamborina noho ny fitenenany malalaka ny heviny tao amin'ny Aterineto ny ankamaroan'ireo mpampiasa ireo. Amin'ireo tranga sasany, notànana izy ireo noho ny fanandratan'izy ireo ny feony manohitra ireo tomponandraiki-panjakana mpanao kolikoly.
Nitombo ireo fiampangàna araka ny lalàna ny fanalàm-baràka ao amin'ny Aterineto sy eny ivelany hatramin'ny niantombohan'ny taompolo taorian'ny UUITE #IndoUpdate16
Ho valin'ireo antso mba hamerenana hijerena ilay lalàna “jadona”, nampanantena ny Antenimieran'ny Solombavambahoaka ao Indonezia (DPR) fa hanisy fanovàna ilay volavolan-dalàna mikasika ny fanalàm-baràka, fanendrikendrehana, ary ny fihainoana elektronika. Vita ny Aogositra lasa teo ilay famerenana fijerena, fa milaza ireo mpandinika fa tsy nangarahara ilay dingana.
Ahitàna ny fanenan-tsazy amin'ny fanalàm-baràka ho lasa 4 taona raha toa ka 6 taona ilay famerenana fijerena ny lalàna, manamafy ny zo hitatitra ireo fanompàna sy fanalàna baràka, manena ny sazy ho an'ny fanaovana sotasota olona manokana ho lasa 4 taona raha toa ka 12 taona teo aloha, ary mikilasy ny fampihorohoroana ao amin'ny Aterineto ho heloka bevava helohin'ny lalàna.
Raha lany io, ho malefadefaka ireo sazin'ny fanalàm-baràka ireo fanovàna, araka ny nangatahan'ireo mpitsikera, fa kosa hampiditra sazy vaovao ho an'ny fandrahonana atao amin'ny alàlan'ny Aterineto.
Ho an'i Supriyadi Widodo Eddyono avy amin'ny Ivontoerana ho an'ny Fanavaozana ny Fitsarana Ady Heloka Bevava (ICJR), mety haneritery ny fahalalahana miteny ao Indonezia ireo fanovàna ireo, satria tsy misy famaritana mazava ny hoe inona no atao hoe fandrahonana ao anatin'ny rafitry ny lalànan'ny firenena. Manahy i Eddyono hoe mety hampiasa ilay andinin-dalàna natsofoka ireo manampahefana mba hanitsahana na hanakanana mihitsy ny tsikeram-bahoaka.
Araka ny tati-baovao iray, hatreto, nosoratana ilay fibahanana vaovao mikasika ny fandrahonana atao amin'ny alàlan'ny Aterineto mba hahafahan'ireo polisy hampiasa io hanakilasiana ho endrika fandrahonana amin'ny Aterineto ireo kisarisary zaraina ao amin'ny Aterineto anebahana ny governemanta .
Raha toa ny Kongresy namarana ny famerenana nijery ilay lalàna, nanao fiampangàna fanalàm-baràka tamin'ilay mpikatroka mafana fo, Harris Azhar, ny polisin'i Indonezia, ny miaramila, ary ny masoivoho miady amin'ny zava-mahadomelina, mpikatroka izay namoaka ny fibabohan'ilay lehiben'ny mpikirakira rongony voaheloka ho faty tamin'ny Jolay 2016. Mampifandray ireo manampahefana zokiolon'ny mpampihatra lalàna amin'ny kolikoly mikasika ny seranà rongony sy tsolotra ilay fibabohana.
Eo anivon'ireo mpikatroka mafana fo, maneho ireo loza mitatao amin'ny fanitarana ny lalànan'ny Aterineto ny raharahan'i Azhar, izay lazain'izy ireo fa mety hampihemotra ireo mpanome vaovao/mpiampanga tsy ho sahy hiseho vahoaka, noho ny tahotra ny hahazo fiampangàna ho nanàla baràka.
Eo am-panoratra ao amin'ny Facebook, mamerina io teboka io ny mpampiasa Aterineto, Turah Saka Bagus Genjing:
Ampiasaina sahala amin'ny fitaovana mahomby hanaparitahana tahotra amin'ireo feo te-hiampànga ny tsy rariny eo amin'ity firenena ity ilay lalànan'ny Aterineto. Hanena ny fandraisan'ny daholobe anjara amin'ny fanarahana maso ireo fihetsiky ny governemanta io. Ampiasaina amin'ireo te-hampiroborobo ny demokrasia ny lalànan'ny Aterineto.
Ny sasany ihany koa mametraka fanontaniana momba ny fotoana nanaovana ilay fanovàna, izay tonga ao anatin'ny fotoanan'ny fampielezankevitry manangasanga ao Indonezia . Milaza ireo mpitsikera fa mety ampiasaina handrahonana ireo mpifaninana ara-politika ary antoko mpanohitra ireo fanovàna ireo, amin'ireo fifidianana eo an-toerana sy isam-paritra ho avy izao.
23 ora izayMyanmar (Birmania)